Furitaanka waddooyinka caasimadda waa kuwo muhiim u ah bulshada. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Furitaanka waddooyinka caasimadda waa kuwo muhiim u ah bulshada.
Furitaanka waddooyinka caasimadda waa kuwo muhiim u ah bulshada.
Wadooyinka waa halbowlaha ay bulshadu u maraan adeegyada aasaasiga ah ee xagga nolosha iyo kuwo kale oo aan looga maarmin habsami u socodka howlaha dowladnimo oo waqti xaadirkaan u muuqdo kuwo ka soo kabanaya burburkii soo gaaray guud ahaan dalka.
Qaar kamid ah waddooyinka ayaa illaa hadda u xiran xaalado amni ,kuwaas oo lagu yareynayo qatarta falalka argagixiso ee ay ku kacaan kooxaha ka horjeeda dowladda Federaalka ee Soomaaliya
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo kaashanaaya Wasiirka Amniga ayaa dhowaan ku guuleystay in la furo wadada u dhaxeysa Guriga Shaqaalaha iyo isgoyska Kaasa Bobolaare oo kamid ah jidadka loo xiray sababo la xiriira xaalado amni.
Mas’uuliyiintaasi ayaa xusay in tallaabadaasi la qaaday ay tahay sidii loo fududeyn lahaa isu socodka dadka iyo gaadiidka,isla markaana loo qaadi lahaa culeyska bulshada ka heysta xiritaanka waddooyinka qaar.
Madaxda Gobalka Banaadir ee horseedka ka ah furitaanka wadadaasi waxa ay soo jeediyeen in dadweynuhu ay dowladda kala shaqeeyaan ilaalinta sharciyada wadooyinka iyo dhinaca amniga .
Waa tallaabo wanaagsan mar haddii maamulka Gobolka Banaadir iyo Wasaaradda Amnigu ay xilligaan garteen muhiimadda waddooyinka xiran ay u leeyihiin isu socodka dadweynaha iyo nuucyada Gaadiidka kala duwan ee ay ku safraan dowladda iyo Bulshada kale.
Illaa hadda waxaa lagu guuleystay in la furo wadada u dhaxeysa Guriga shaqaalaha iyo Kaasa bobolaare.waana tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka wanaagsan,iyadoo la ballan qaaday in kuwa dhimman si degdeg ah logu howlgalayo.
Wadooyinka xiran, isla markaana u baahan in laga qaado dhagxanta waaweyn ee lagu dadbay waxaa kamid ah jidka u dhaxeeya Nambar Afar iyo Tarabuunka,kaas oo ah waddo halbowle ah oo loo maro xarumo caafimaad,Jaamacado iyo xaafado ku yaalla degmafa Hodan,
Wadada kale ee isku xirta Dekedda iyo Sayidka ayaa kamid ah jidadka xiran oo haddii lafuro fududeynaya isu socodka nucyada Gaadiidka,waxaana sidoo kale jira kuwo xiran oo ay ugu horeeyaan tan marta Baar Fiyaat iyo Beexaani ,Garoonka Diyaaradaha iyo tan kale ee hareer marta Bangigan iyo Degmada Shingaani
Waxaa dhibaato ah in waddooyinka Magaalada Muqdisho oo hagaajintoodu ku baxday lacago malaayiin ah oo doolar,kuwona ay haatan socoto dhismahoodu ay jiraan dad waxmagarad ah oo qashinka faraha badan iyo biyaha wasaqda ah ee laga isticmaalo xaafadaha ku shuba jidadka.
Inkastoo ay bilow tahay howsha furitaanka jidadka, haddana waxaa jira kuwo shaqeeya oo ay ka muuqdaan qashin iyo biyo wasaq ah,sida tan u dhaxeysa Afisiyooni iyo Ceel gab,Waana in la sameeyo wacyigelin joogto ah oo dadka loogu sheegayo ilaalinta waddooyinka.
Maamul wanaagsan ayaa xil iska saara sidii mudnaanta loo siin lahaa fayo qabka deegaaanka ,gaar ahaan furitaanka waddooyinka Waxaana Maamulka Goblka Banaadir laga sugayaa in uu si degdeg ah u dhameystiro dib u furidda jidadka, iyadoo , howsha ugu weyn ay tahay xakameynta iyo qabashada kooxaha caadeystay burburinta jidadka laamiga ah.
Dantu waxa ay ku jirtaa guud ahaan in la furo jidadka u xiran Dowladda, hey’adaha iyo ganacsatada,lagana wada shaqeeyo soo celinta amniga ,sababtoo ah waddooyinkaasi inta badan waxa ay yihiin kuwo aan looga maarmin adeegyada lagu raadinayo nolosha dadka iyo isu socodka nuucyada gaadiidka.
Dadnimada ayaa ku fareysa in loo howlgalo ilaalinta iyo dib u furista waddooyinka gala goobaha laga fuliyo adegyada bulshada sida suuqyada,xarumaha caafimaadka iyo wixii kale oo la halmaala.
W/Qoray Shire Xasan Kulmiye
Previous articleMadaxweynaha Galmudug oo rajo wanaagsan ka muujiyey wada hadalada u dhaxeeyo Galmudug iyo Ahlusuna
Next articleMaamulka Gobolka Benaadir oo dib u howlgelinayo Dugsiga 15 May (Daawo Muuqaal)